भेरी अस्पतालका सटर माफियाको जालो तोडीयो – GoodnewsKhabar
सटर भत्काएर के हुँदैछ ?
गुडन्यूज खबर । २०७८ आश्विन ११, सोमबार १६:२४
भेरी अस्पताल नेपालगन्जको मूल गेटको उत्तरमा पौडेल बर्दिया होटल थियो । अस्पताल परिसरमा राम्रो क्यान्टिन नभएकाले बिरामी र कुरुवाले यही होटलबाट खाना र खाजा लैजान्थे । मानौं भेरी अस्पतालको क्यान्टिन नै यही हो । सञ्चालक विपिन ढुंगानाका अनुसार होटलले २ वटा सटरका लागि मासिक रुपमा ५४ हजार रुपैयाँ भाडा तिथ्यो । भेरी अस्पताल व्यवस्थापनले अहिले यो सटर भत्काइएको छ ।
भेरी अस्पतालकैै सटरमा थियो, लुम्बिनी मेडिकल पनि । ४ वर्षदेखि मेडिकल सञ्चालन गरिरहनुभएका किरण ऐर पनि २ वटा सटरका लागि ४९ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको बताउनुहुन्छ । यही सटरमा भेरी अल्ट्रासाउण्ड पनि थियो । सेवाग्राहीलाई भेरीको नामै भएकाले भेरी अस्पतालकै अल्ट्रासाउण्ड हो कि भन्ने भान हुन्थ्यो । अहिले यो अल्ट्रासाउण्ड बाटो पारी छ ।
अस्पताल परिसरमा निर्माण गरिएका यी सटर त प्रतिनिधि मात्र हुन् । अस्पतालका सटरमा मेडिकल, अल्ट्रासाउण्ड, ल्याब, होटल, खाजा पसल, किराना पसल सञ्चालन गरिएका थिए । हरेक चार चार वर्षमा सम्झौता नविकरण हुने भेरीका यी सटर केही व्यक्तिले ठेक्का लिँदै चर्को भाडा असुल गर्थे । अस्पताललार्ई न्यूनतम् भाडा मात्र तिर्थे ।
अस्पताल विकास समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठका अनुुुसार कम्तीमा १० हजारदेखि २ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएको थियो । यसरी बनेका सटरको सबै भाडाको पैसा पनि भेरीले पाउँदैनथ्यो । अस्पतालको जग्गामा बनेका सटरमा नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हिस्सा छ ।
भेरी अस्पताल विकास समितिका अर्का सदस्य धनीराम ओलीका अनुसार २०६५ सालदेखि नै सटर भत्काउने प्रयास थालिएको थियो तर माफियाको जालो तोड्न सकिएको थिएन ।
‘धेरै पटक पत्राचार गरे पनि हटेको थिएन । नेपाल अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७२ र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नति निर्देशिका २०७० को पहिलो संशोधन २०७३ को आधारमा अस्पतालको न्यूनतम् मापदण्ड सुधारका निमित्त बनाइएको कार्यविधिले अस्पताल परिसरमा कुनै पनि व्यवसायिक प्रयोजनका व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो ।
वीर अस्पताल, लुम्बिनी अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुद्दा पनि परेको थियो’, सदस्य ओलीले प्रष्ट पार्नुभयोे, ‘भेरीमा निरन्तर पत्राचार गर्दा पनि भत्काउन नसकिरहेको अवस्था थियो । २०७६-७७ को सरकारको नीति तथा कार्र्यक्रममा भेरी अस्पताललाई ५०० शैैयाको विशिष्ठीकृत अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने भनेर घोषणा भएको थियो । २४० शैया निर्र्माणाधीन रहेको यही मंसिर ८ गते हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।
२०७८-७९ को बजेटमा अस्पतालमा २६० शैयाको पूरै डीपीआर भएर कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि सटर खाली गराउनु पर्ने नै थियो । पटक पटक हामीले पत्राचार गरेका छौं । व्यवसायीसँग बस्यौं । छलफल गर्यौं । सफल भयौं ।’
सटर खाली गर्न र भत्काउन व्यवसायीको पनि सहमति खोजिएको छ । अस्पताल विकासमा अवरोध नगर्ने सहमति भएकाले सटर भत्काउन सम्भव भएको हो । सहमति अनुसार अस्पतालले २ महिनाको भाडा मिनाहा गरेकोे छ । बक्यौता भाडा तिर्न केही समय अवधि दिने पनि सहमति भएको छ ।
‘अब फेरि सटर निर्माणको काम हुनेछैन । सौन्दर्यकरण हुनेछ । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि फेरि विल्डिङ बन्नेछैन ।
एउटा सुन्दर ५ सय शैयाको अस्पताललाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ ? यहाँको सेवामा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ ? अझै विशेषज्ञ किसिमका सेवाहरु थप गर्न सकिन्छ भन्नेमा अस्पताल विकास समिति लागिरहेको छ’, ओलीले बताउनुभयो । अर्का सदस्य श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ्, ‘अस्पतालमा भत्काएको ठाउँमा नयाँ पूर्वाधारको रुपमा पर्खाल मात्र हुनेछ । हामीले सौन्दर्यकरणमा मात्र ध्यान दिनेछौ । यो अस्पताललाई हेर्न लायक र हेर्न लालायित हुने गरी बनाइनेछ ।’
गुडन्यूज साप्ताहिक पत्रिकाबाट
२०७८ आश्विन ११, सोमबार १६:२४
बर्दिया । बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिकामा मेन्टल स्वास्थ्यको समस्या विकराल देखिएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् । बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल (टि.पो.ओ.)ले बढैयातालमा मंगलबार आयोजना गरेको मनोसामाजिक मानसिक स्वास्थ्यलाई स्थानिय तहमा समाहित गर्ने विषयक एक दिवशिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख शंकर प्रसाद थारुले भौतिक संरचना संगै […]
२०७८ जेष्ठ १६, आईतवार १८:१७
स्कुलको राहात कोषमा ४० हजार बरावर खाद्यान्न सहयोग
२०७७ मंसिर २३, मंगलवार ०७:१३
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक, यस्ता छन् कांग्रेसले उठाउने एजेण्डा
२०७७ पुष २, बिहीबार ०७:१४
२०७८ श्रावण २९, शुक्रबार १७:५२
ला लिगा आजदेखि